Dhibka uu Faysbuuggu u Geystay Saaxibo Isjeclaa – Bal arag gartii ugu yaabka badnayd ee aan naqay! |
Sidee Ayaan Abaarta Oga Bixi Karnaa? |Tukesomalism.com
Sahal Issaakh, January 4, 2017
Dhibka uu Faysbuuggu u Geystay Saaxibo Isjeclaa – Bal arag gartii ugu yaabka badnayd ee aan naqay!
Suldaan Nayruus — November 28, 2018
Maalin dhaweyd ayaa waxaa i soo wacay wiil dhallinyaro ah oo aannu is naqaannay. Waxa uu iga codsaday in aan kulanno. Goor galab ah ayaan ku ballamiyey meel maqaayad ah oo shaaha laga cabbo. Markii uu ii yimid, ayuu ii sheegey in wiil kale oo aan adeer u ahaa oo ay saaxiib dhab ahaayeen, in uu taleefoonkii muddo laba toddobaad ah ka qaban waayey, xitaa farriimihii uu uga soo jawaabi waayey. Haddii uu taleefoon kale ka wacana, uu ka qabanayo, marka uu codkayga dareemana uu daminayo.
Sababta arrintaas keentana ilaa iyo hadda uusan garanayn! Waxa uu iga codsaday in aan waco, oo waxa uu ka tabanayo saaxiibkiis aan weydiiyo, dabadeedna aan dhex-dhexaadiyo.
Waan wacay wiilkii, waana ii yimid wax yar ka dib. Arrinta uu saaxiibki taleefoonka uga qaban waayey ayaan weydiiyey, kolkaas buu ii sheegey arrintaan aan la yaabay, waxa uuna yiri, “Adeer, ninkan iyo anigu saaxiib ayaan ahayn. In aan gooyo waxaa keenay, waa arrin dhanka Faysbuugga ah. Anigu Faysbuuggiisa mar walba waan la socdaa waxa uu soo dhigo, like, comment iyo share na waan dhahaa. Isagana, waa arkaa waxa aan soo dhigo, hal marna like ma saaro, iska daa comment e. Dhawr jeer baan arrintaas ku soo qaaday, kolkaas buu igu dhahaa, saaxiib, igu hallee, haddana ma fuliyo.
Asxaabta kalana waxaad arkaysaa isaga oo u cammiraya! Markii dambe, waxa aan arkay in uusan dan iyo heello ka lahayn kuweyga. Sidaas baan ku ogaaday in uusan saaxiib dhab ah u ahayn. Qof aan kuu cammirayn maalinna, maxay tahay saaxiibtinimadiisu. Anna waan gooyey saaxiibtinimadiisa!”. Inta yaabey ayaan kii kale weydiiyey arrintaas, kolkaas buu qirtay.
Markaas baan dhex-dhexaadin bilaabay. Kii dacwoonayey ayaan iri, hadda Facebook gaaga gal, oo ka sii gal profile ka saaxiibkaagan. 5 ta qoraal ee ugu dambeysay ee uu soo dhigay, like saar, comment ka bixi, share na dheh. Waa sameeyey. Ka dib, waxa aan u so jeediyey in uu la socdo wax kasta oo uu ninkaas soo dhigo, oo u cammiro, si saaxiibtinimada ay u sii jirto, kii kalana, waxa aan ku amray in uu saaxiibtinimadii soo celiyo. Inta Xabadka isa saareen ayey, iyaga oo wada socda iga dhaqaaqeen.
Tags: Dhibka uu Faysbuuggu u Geystay Saaxibo Isjeclaa - Bal arag gartii ugu yaabka badnayd ee aan naqay!
Next post Waa Markii Koowaad oo Ay Taariikhda Soomaaliya Kadhacdo - Bal arag cajabtaan!
Previous post Soo Dhaweyn Lala Ashqaraarey oo uu Nin Sucuudiyaan Ah u Sameeyey NinShaqaalihiisa Ahaa - Arrin yaab leh oo qabsatay baraha bulshada Khaliijka